တပ်မတော်(ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဘုရင့်နောင်) ခြေလျင်တပ်ခွဲမှူး သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၂)၊ တန်းခွဲ(၂) ယီမင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် သမ္မတဆာလက်ဟ် (ဝါဒဖြန့် ဟောပြောမှုစာတမ်း).. ~ ဒီမိုဝေယံ
တပ်မတော်(ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဘုရင့်နောင်) ခြေလျင်တပ်ခွဲမှူး သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၂)၊ တန်းခွဲ(၂) ယီမင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် သမ္မတဆာလက်ဟ် (ဝါဒဖြန့် ဟောပြောမှုစာတမ်း)..
SCRIBD ဖိုင် ဖတ်ရ အဆင်မပြေသူများ အတွက် ဝါဒဖြန့််စာတမ်းအား အားလုံးအဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် Doငနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
(ယီမင်သမိုင်းကြောင်းကတော့ ဗဟုသုတအဖြစ် လေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်)
တပ်မတော်(ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း (ဘုရင့်နောင်)
ခြေလျင်တပ်ခွဲမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၂)၊ တန်းခွဲ(၂)
ယီမင်ဆန္ဒပြမှုများနှင့် သမ္မတဆာလက်ဟ် ဟောပြောမှုစာတမ်း
၁။ ၂၁ ရာစုအတွင်း ထူးခြားသောနိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ ဖရိုဖရဲပြိုကွဲသွားသော နိုင်ငံများ၊ ပြင်းထန်သောနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနှင့် ကြုံတွေ.ရသည့်နိုင်ငံများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထူးထူးခြားခြား တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ယင်းဖြစ်ရပ်အများစုမှာ ကမ္ဘာပေါ်၌ တည်နေရာ အနေအထားအရ ဗဟိုအချက်အခြာကျသော အရှေ.အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းဒေသအနီးတစ်ဝိုက်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို တွေ.ရပါသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရတ်၊ ဆိုမာလီ စသော စစ်ဒဏ်သင့်နိုင်ငံများ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တူနီးရှား၊ အီရတ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား၊ ဘာရိန်း စသော အာရပ်နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး ဆူနာမီဒဏ်ချက်များနှင့် ကြုံခဲ့ပါသည်။ သို.သော် ထိုနိုင်ငံများနှင့် စာလျှင် ယီမင်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားနေသည်က ပို၍ ရှုပ်ထွေးကျပ်တည်း ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အာရေဗျကျွန်းဆွယ် အရှေ့တောင်ဘက်အစွန်၌ တည်ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၄ သန်းမျှသာရှိသော ယီမင်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံသေးငယ်သလောက် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင်နိုင်ငံ၏ ပြဿနာတို.က များပြားရှုပ်ထွေးလှပါသည်။
၂။ ယီမင်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းသွားလာရေး၌ အဓိကကျသော ပင်လယ်နီအောက်ပိုင်း အေဒင်ပင်လယ်ကမ်းခြေ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သဲကန္တာရ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထားအရ ပူပြင်းခြောက်သွေ.ပြီး စိုက်ပျိုးရန် ရေ၊ မြေ ရှားပါးပြီး လူများစုမှာ ဆင်းရဲလွန်းလှပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်း၊ လက်နက်မှောင်ခို၊ လူပြန်ပေးဂိုဏ်းစသည့် နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများ ပြွမ်းတီးသောနေရာ ဖြစ်သည်။ရှေးရိုးစွဲ ဘာသာရေး ပြင်းထန်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ အာရေဗျကျွန်းဆွယ် အခြေပြု အယ်လ်ခိုင်ဒါ (AQAP) ကဲ့သို. ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
၃။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းပေါင်းစည်း နိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် တောင်ပိုင်းသားတို.၏ ခွဲထွက်လိုမှု စိတ်ဓာတ် ကျန်ရှိနေသဖြင့် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အရေးပါသော ထိပ်ပိုင်းနေရာများကို မြောက်ပိုင်းသားတို.က ချုပ်ကိုင်အုပ်စီးထားသည်ဟု ဆိုကာတောင်ပိုင်းသားတို.က မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိသမ္မတ အဗ္ဗဒူလာ ဆာလက်ဟ်သည် ယီမင် နှစ်နိုင်ငံ မပေါင်းစည်းမီ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ကပင် မြောက်ယီမင်၌ သမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းပြီး နောက်တွင်လည်း ယီမင်သမ္မတဆက်၍ ဖြစ်ခဲ့ရာ ၎င်း၏ လက်ထက်တွင် အာဏာဆုပ်ကိုင်ထားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူ၏ အာဏာ တည်တံခိုင်မြဲရေးအတွက် အရေးပါသော နေရာများတွင် ဆွေမျိုးသားချင်းများကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကောင်းများတွင်လည်း နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများကို ချထားပေးခဲ့ပါသည်။
၄။ သို.သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ အရှေ.အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက မြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူထုဆူပူအုံကြွမှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်စိုးလာခဲ့သည့် အစိုးရများကို ဇီဝိန်ချုပ်သွားစေ ခဲ့သောအခါ ယီမင်မှ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကလည်း အလားတူ လှုပ်ရှားအုံကြွလာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ယီမင်နိုင်ငံ၌ ဆန္ဒပြမှုများစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါသည်။ သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.များက အင်အားသုံး ဖြိုခွဲရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ဆူပူဆန္ဒပြမှုများ နိဂုံးချုပ်မသွားဘဲ သက်ဆိုးရှည်နေခဲ့ပါသည်။
၅။ ယီမင်နိုင်ငံ၏ နောက်ခံသမိုင်း အခြေအနေ၊ ယီမင်သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ အကြောင်းကို ဦးစွာလေ့လာပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ယီမင်နိုင်ငံ၏ ဆန္ဒပြမှု အခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်၍ မိမိတို့နိုငံအား ထိုသို. ဆန္ဒပြမှုများ မပေါ်ပေါက် မဖြစ်ပွား စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် ဆန္ဒပြဆူပူမှုများသည် အကြောင်း အမျိုးမျိုးတို.ကို အရင်းခံကာ ဖြစ်ပွားတတ်သည်ဖြစ်၍ ပေါ်ပေါက်လာပါက ကာကွယ်နိုင်ရန်။
၆။ ယီမင်နိုင်ငံသည် ရှေးပဝေသဏီနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင် တည်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယီမင်နိုင်ငံသည် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းနေသည့် မြေသြဇာ ကောင်း သောကုန်းမြေများနှင့် လုံလောက်သော မိုးရွာသွန်းမှုများသည့် စွတ်စိုသည့် ရာသီဥတုရှိ ပြီး လူအများစု အခြေချနေထိုင်နိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂရိပထ၀ီဝင် ဆရာများက ယီမင်ပြည်သူများအား ရှေးယခင်က အနာဂတ်တွင် တောက်ပလာမည့် အာရပ်များ(သို့မဟုတ်) ပျော်ရွှင်ခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံမည့် အာရပ်များဟု တင်စားခဲ့ကြသည်။
၇။ ယီမင်သမ္မတနိုင်ငံဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ တည်ရှိပြီး အာရေဗျ ကျွန်းဆွယ်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်အစွန်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ယီမင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံ တွေကတော့ မြောက်ဘက်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား၊ အရှေ့ဘက်မှာတော့ အိုမန်နိုင်ငံနဲ့ အနောက်ဘက်မှာတော့ ပင်လယ်နီတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၈။ ပထ၀ီအနေအထားအရ ယီမင်ဟာ အာရပ်ကမ္ဘာအတွင်းမှာရှိပြီး မြောက်လတ္တီကျူ့ ၁၂ မှ ၁၉ ဒီဂရီအတွင်း၊ အရှေ့လတ္တီကျူ့ ၄၂ ကနေ ၅၅ ဒီဂရီအတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ယီမင်ဟာ ကုန်းမြေ ဧရိယာ ၅၅၅,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ ၄၉ နိုင်ငံမြောက် အကျယ်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၂၄ သန်းရှိပြီး အကြီးဆုံးမြို့နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ကတော့ ဆားနားဖြစ်ပါတယ်။ ယီမင်ရဲ့ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ဧရိယာထဲမှာ အကြီးဆုံးကျွန်း ဆိုကိုထရာဟာ ဆိုမာလီယာကမ်းရိုးတန်း အလွန်မှာရှိပြီး ပင်မယီမင်နိုင်ငံနဲ့ ၄၁၅ ကီလိုမီတာ ဝေးကွာပြီး ကျွန်းငယ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ဒီနေရာမှာ ယီမင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ မူလ ယီမင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နေသွားရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ညာဘက်ပိုင်းလို့ ခေါ်ဆိုရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ တောင်ဘက်ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင် ရောမနိုင်ငံက ရိုမန်လူမျိုးတွေကတော့ အာရေဗျရဲ့ ကံကြမ္မာလို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ယီမင်ဟာ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ပြောသလဲဆိုရင် ယီမင်ဟာ ရှေးအကျဆုံး ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာ ဗဟို အချက်အချာဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံဘေးမှာ တည်ရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်မပေါ်မီ ၁၂ ရာစုနဲ့ ၆ ရာစုအတွင်းမှာ မြို့ပြနိုင်ငံလေးများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အီသီယိုပီယမ်းနဲ့ ပါရှန်းတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေးအနေနဲ့ အစ္စလန်မစ် ယုံကြည်မှုဟာ ၇ ရာစုထဲမှာ အစပျိုးခဲ့ပြီး ယီမင်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ လောက် ပါရှန်းတွေရဲ့အောက်မှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါအပြင့် ၁၁ ရာစု၊ ၁၆ ရာစုနဲ့ ၁၉ ရာစုတွေမှာ ယီမင်ဟာ အော်တိုမန်အင်ပါယာရဲ့အောက်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၀။ ယီမင်ရဲ့ စီးပွားရေးကတော့ အာရပ်ကမ္ဘာအတွင်းမှာ အဆင်းရဲဆုံးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ကျဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြေမျက်နှာသွင် ပြင်အနေအထားအရ ပူပြင်း ခြောက်သွေ့ပြီး ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင်များ ပေါများတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးရန် မြေရှားပါးပါတယ်။ ရေနံအရင်းအမြစ်ဟာ အရမ်းနည်းပါးပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေး ဟာလည်း ရေနံအပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေရပါတယ်။
၁၁။ ယီမင်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကလေးမွေးနှုန်း အများဆုံးနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျွန်းပေါင်း ၂၀၀ လောက်မှာ မီးတောင်တွေ ရှိနေတာ၊ ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အာရေဗျဘာသာစကားကို သုံးတာ၊ ဒါ့အပြင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အရေအတွက်ဟာ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတာ အစရှိသဖြစ့် တွေ့ရပါတယ်။ ပိုပြီး ထူးတာကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ မြို့တော်ဆားနားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး ရေအောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့ မြို့အဖြစ် ဖြစ်နိုင်ချေ များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကြောင့် အာတိတ်ဒေသက ရေခဲတွေ အရည်ပျော်မှုကနေ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမယ့် အခြေအနေအဖြစ် မြင်ထားတဲ့ ဟာလေးတစ်ခုပါ။
၁၂။ ယီမင်နိုင်ငံသည် ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ပြီး PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF YEMEN နိုင်ငံဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစခေတ်တွင် YEMENI SOCIALIST PARTY သည် တစ်ခုတည်းသော အင်အားကြီးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယီမင်နိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ တရုတ်ပြည့်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျူးဘား နိုင်ငံနှင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံတို့နှင့် ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် REPUBLIC OF YEMEN လို့ ကြေငြာခဲ့ပြီး ဆာလက်ဟ်သည် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆာလက်ဟ်၏ သမ္မတအစိုးရအဖွဲ့တွင် အကြံပေးကောင်စီ ၂၆ ဦး၊ နိုင်ငံ ရေးဦးဆောင်သောအဖွဲ့ ၁၇ ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သမ္မတအစိုးရအဖွဲ့တွင် ၀န်ကြီးချုပ် တစ်ဦးခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်သည် ကက်ဘိနက် လူကြီးဖြစ်သည်။ ပါလီမန်မှာတော့ နေရာ ၃၀၁ နေရာရှိပြီး မြောက်ပိုင်းးမှ ၁၅၉ နေရာ တောင်ပိုင်းမှ ၁၁၁ နေရာ၊ လွတ်လပ် တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက ၃၁ နေရာ အသီးသီး ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကို ၁၉၉၀ မေလ တွင် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ မေလတွင် စတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့ သည်။
၁၃။ ယီမင်သမ္မတအလီအဘဒူလာဆာလက်ကို ၁၉၄၂ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ယီမင်နိုင်ငံ အယ်လ်မာမြို့အယ်လ်မာမိသားစုမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သမ္မတဆာလေး၏ မိသားစုသည် ဟာရှက်နွယ်ဖွားများဖြစ်သည်။ ဆာလေး သည် ဇေဒီရှီးယားမူဆလင်လူမျိုး ဖြစ်သည်။ သူ၏မိသားစုသည် ဟာရှက်နွယ်ဖွားဖြစ် သော်လည်း သူကား ဟာရှက်လူမျိုးအမည်မခံပေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တိုင်အောင် ယီမင်နိုင်ငံ တွင်ချမှတ်ခဲ့သော မူတာဝတ်ကီ (ယီမင်ဘုရင်)၏ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုနည်းဥပဒေများကို လက်ခံသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပေ။ သမ္မတဆာလေးသည် အခြေခံပညာရေးမျှသာ သင်ကြားတတ်မြောက်ထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဆာလေးသည် မြောက်ယီမင်တပ်မတော်သို့ ၀င်ရောက်အမှုထမ်းပြီး ၁၉၆၀ခုနှစ်တွင် မြောက်ယီမင် အ ခြေခံစစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တပ်ကြပ်ရာထူးကို ရရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်။ မြောက်ယီမင်တပ်မတော်တွင် သုံးနှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းပြီးသောအခါ ဒုတိယဗိုလ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဆာလေးအား မြောက်ယီမင် သမ္မတ အာမက်ဘင်အယ်လ်ဂါရှမီးက တိုင်းဇ်ပြည်နယ်၏ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးတာဝန်ကို ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၄။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက် နေ့တွင် မြောက်ယီမင်သမ္မတ အယ်လ်ဂါရှမီး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ အယ်လ်ဂါရှမီး လုပ်ကြံခံရပြီးနောက်တွင် ဆာလက်အား ယာယီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လေးဦးအနက် တစ်ဦးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့ အစည်း၏ ဒုတိယအကြီးအကဲတာဝန်ကိုပါ ပူးတွဲခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဇူ လိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပါလီမန်မှ အာရပ်ယီမင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော သမ္မတ အဖြစ်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
၁၅။ ၁၉၇၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဆာလက်သည် သူ၏မူဝါဒနှင့် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရင် လျှို့ဝှက်ကြံစည်နေသော အရာရှိ (၃၀)ဦးအား နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဖြင့်သေ ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဆာလေးသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် အထွေထွေလူအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ ပြုလွတ်တော်မှ ရွေးကောက်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၁၉၈၃ခုနှစ်တွင် အာရပ်ယီမင် သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမ္မတအဖြစ် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၆။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကို မရရှိတော့သည့် တောင်ယီမင်နိုင်ငံ သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီး မြောက်ယီမင်နိုင်ငံနှင့် ပေါင်း စည်းရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ တောင်ယီမင်နိုင်ငံသည် ပေါင်းစည်းယီမင်နိုင်ငံ၏ သမ္မ တအဖြစ် ဆာလက်အား အလီဆလင်းအယ်လ်ဘေး ဒုသမ္မတအဖြစ် အစိုးရကောင်စီ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ သည်။ အလီအဘဒူလာဆာလက်ဟ်သည် အီရတ်အာဏာရှင် ဆက်ဒန်ဟူစိန်နှင် အချိန် အတော်ကြာ မဟာမိတ်နိုင်ငံအဖြစ်နေလာခဲ့သည်။ထို့အပြင် ဆက်ဒန်ဟူစိန်၏ ကူဝိတ် အားကျူးကျော် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုလည်း ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ ပင်လယ် ကွေ့စစ်ပွဲတွင် အီရတ်တို့ရှူံးနှိမ့်ခဲ့စဉ်က ကူဝိတ်နိုင်ငံမှ ယီမင် အလုပ်သမားများအား မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။
၁၇။ ၁၉၉၃ခုနှစ် ပေါင်းစည်းယီမင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ဆာလက်ဟ်၏ အထွေထွေလူ့အဖွဲ့အစည်း ကွန်ဂရက်ပါတီက ပါလီမန်နေရာ ၃၀၁ ခုရှိ ရာ ၁၂၂ နေရာအထိရရှိကာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဆာလက်ဟ်အား ပါလီမန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးအား ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိ အနေအထားတွင် ဆာလက်ဟ်သည် ယီမင်နိုင်ငံ၏စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးရာထူးကို ရရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသူဖြစ်သည်။ ဆာလက်ဟ်သည် ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် သမ္မတ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ရေး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထောက်ခံမဲ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ သည်။ သူ၏ပြိုင်ဘက် သမ္မတလောင်းဖြစ်သည့် ယခင်တောင်ယီမင်နိုင်ငံသမ္မတ ကွမ် တန်မူဟာမက်အက်ရှာဘီ၏ သားဖြစ်သူ နာဂျစ်ကွမ်တန်သည် ဆာလက်ဟ်၏ အထွေ ထွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ဂရက်၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော်ငြားလည်း ပြည်ပြေးဖြစ်ခဲ့ရ သည်။ ၁၉၉၉ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တွင် သမ္မတသက်တမ်းအား ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ် သို့လည်းကောင်း ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်သက်တမ်းအား ၄ နှစ်မှ ၆ နှစ်သို့တိုးမြှင့်ကြောင်း ဥပ ဒေတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေပြုအာဏာရေးဆွဲရန်အ တွက် အဖွဲ့ဝင် (၁၁၁)ဦးပါဝင်သော အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုပြောင်းလဲ မှုသည် ယီမင်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး မှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။
၁၈။ ၂၀၀၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်ကျင်းပသော သူ၏သမ္မတသက်တမ်းတွင် ၂၇ ကြိမ် မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၀၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သမ္မတရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကြေငြာခဲ့သည်။ သူ၏အထွေထွေလူမှုအဖွဲ့အစည်း ကွန်ဂရက်ပါတီ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ရန်အတွက်လည်း မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ၏ပါတီအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်ငယ်များအား ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်မှုများကို လိုလားကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းသော လက်ဆင့်ကမ်းမှုမျိုးကို လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်တွင် ဆာလက်ဟ်သည် သူ့ပါတီ၏ သမ္မတလောင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းကို လက်ခံခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော အာဏာ အလွဲအပြောင်းဖြင့် အာဏာပြောင်းလွဲရယူတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့သော် လည်း လက်ရှိတွင် ယီမင်လူထု၏ ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ ဖိအားပေးခြင်းပါ ပထမဦးဆုံး ကြုံတွေ့လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် အလီဆိုက်ဟဆန်သည် ဆာလက်ဟ်အနေဖြင့် ပြိုင်ဘက်သမ္မတလောင်းအနေဖြင့် ယီမင်နိုင်ငံမှ သေချာပေါက်ထွက်ပြေးရလိမ့်မည်ဟု ခန်ု့မှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆာလက်ဟ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သော ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် မို ဟာမက်အယ်လ်ရူဘိုင်သည် သမ္မတအနေဖြင့် သူ၏ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အ လေးအနက်မထားကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ သူ့၏သဘောထားအရ ဆာလက်ဟ် အား နေရာမှဖယ်ပေးဖို့ ကြိုတင်ကြေငြာ ထားဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
၁၉။ ၂၀၀၆ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ခဲ့ရာ ထောက်ခံမဲ ၇၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏အဓိကပြိုက်ဘက် ဖြစ် သော ဇိုင်ဆယ်ဘင်ရှမ်းလန်သည် ၂၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိခဲ့သည်။ ဆာလေးသည် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတကျန်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
၂၀။ ယီမင်နိုင်ငံ၏ ဆန္ဒပြပွဲများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် ဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သော တူနီးရှားနိုင်ငံမှ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများနှင့် ၄င်းနောက်တွင် ကပ်လိုက်ပါလာသော အီဂျစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများ၊ အခြားအာရပ်ကမ္ဘာက ဆန္ဒပြပွဲများနောက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော နိုင်ငံရေး ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဆန္ဒ များသည် အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာ၊ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု စီးပွားရေးအခြေအနေ အစိုးရ အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုချက်များ စသည့် အချက်များမှ စတင်ပေါက်ဖွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ဖို့နှင့် သမ္မတ ဆာလက်ဟ် နှုတ်ထွက်ဖို့ စသည်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၁။ ဆန္ဒပြသူ ၁၆၀၀၀ ကျော်သည် မြို့တော် ဆာနာမှာ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၇ နေ့ မှာ စတင်စုရုံးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ သမ္မတ ဆာလက်ဟ် သည် ၂၀၁၃ မတိုင်မှီ သူရဲ့သားအား အာဏာမလွဲပြောင်း မပြီးမချင်း ၄င်းရာထူးမှ နှုတ် ထွက်ပေးမည်မဟုတ်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှာတော့ ဆန္ဒပြသူ ၂၀၀၀၀ကျော်သည် မြို့တော် ဆာနာနှင့် ဗိနည မြို့တွင် ထပ်မံဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြန် သည်။ ၄င်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် စစ်သားများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင် အချို့ ပါဝင် ခဲ့ပြီး ယင်းတို့၏ လိုလားချက်များကို မြို့တော် ဆာနာတွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၁၈ ယင်းတို့အခေါ်(Friday Of anger)တွင် ယီမင်နိုင်ငံသားတစ်သိန်းကျော် ခန့် သည် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်းအား မြို့တော် ဆာနာနှင့် ဗိနည မြို့များတွင် ဖွဲ့ စည်းလိုက်လေသည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့အခေါ်အရ(Friday Of return) တွင် သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ စစ်တပ်တွေ၏ အကြမ်းဖက် လူစုခွဲမှုကြောင့် လူသုံးဦး သေ ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဆန္ဒပြပွဲသည် အခြားမြို့များအထိ ကူးစက် ပျံနှံ့သွားပြီး အယ်လ်မူကာလာ မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ မြို့တော် ဆာနာ တွင် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုများဖြင့် လူထုစုဝေးဆန္ဒပြမှု့ကို နှိမ်နှင်းခဲ့ရာတွင် လူ ၄၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
၂၂။ ဧပြီလ ၂၃ မှာတော့ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် တောင်းဆိုချက်များနှင့် သမ္မတ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရေး၊ ဒုတိယသမ္မတအား တစ်လအတွင်း အာဏာလွဲပြောင်းပေး အပ်ရေးတို့ကို သဘောတူလက်ခဲခဲ့သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်များတွင် သူ့အား လွတ် ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရေးနှင့် သူ့မိသားဝင်များအား အကာအကွယ်ပေးရေး အတိုက်အခံ များအနေဖြင့် ယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရာတွင် သူ၏ပါတီကိုပါ ပါဝင်ခွင့်ပြုရေး စသည့် အ ချက်များပါဝင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏တောင်းဆိုချက်များအား ပုံမှန်တရားဝင်သဘော တူညီမှုမဟုတ်ပဲ လက်ခံခဲ့ပြီး အတိုက်အခံဆန္ဒပြ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သမ္မတအကြား ပြေလည်မှုရအောင် ယာယီ သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် အာဏာစွန့်လွတ်မှုကို ပြန်လည်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက် အခြေအနေဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာ ခဲ့ပါသည်။
၂၃။ မေ ၂၃ တွင် တိုင်းပြည်တွင် သြဇာအာဏာရှိသော လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် Sheikh Sadiq Al-ahmar ကို ထောက်ခံသော သမ္မတကိုဆန့်ကျင်သူတွေနှင့် သမ္မတကို ထောက် ခံသော သူတွေအကြားတွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ မြို့တော် ဆန်နာမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ မြို့တော် ဆန်နာ လမ်းမများပေါ်တွင် အမြောက်များပါဝင်သည်အထိ ပြသနာ များဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇွန် ၃ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သမ္မတနန်းတော်ဝင်းအတွင်း ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် သမ္မတဆာလက်ဟ် အပြင် လူအတော်များများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ပြီး လူသုံးဦး သေကြေခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် သမ္မတ ဆာလက်ဟ် သည်ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယားနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ် ဒုတိယသမ္မတ Abad al- Rab Mansur al- Hadi က အာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ဆော်ဒီမြို့ တော်တွင် မီးလောင်ဒဏ်ရာများကို ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် ဇွန် ၄ ရက်တွင် ဆော်ဒီဘုရင် အဗ္ဗဒူလာနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၂၄။ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဆ်ာနာတိုက်ပွဲသည် ယီမင်သမ္မတဆာလက်ဟ်ကို ထောက်ခံသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် Sheikh Sadiq al-ahmar ဦး ဆောင်သည့် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်းကြား ယီမင်နိုင်ငံမြို့တော် ဆန်နာမှာ ဖြစ် ပွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပြသနာများဖြစ်သည်။ ထိုပြသနာများကြောင့် မြို့တော်အတွင်း မှာ ကြောက်ကရွံ့စရာကောင်းသည့် မြို့တွင်း တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၅။ ယီမင်နိုင်ငံ၏ ဆန္ဒပြပွဲများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် ဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သော တူနီးရှားနိုင်ငံမှ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများနှင့် ၄င်းနောက်တွင် ကပ်လိုက်ပါလာသော အီဂျစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေးတော်လှန်ပုန်ကန်မှုများ၊ အခြားအာရပ်ကမ္ဘာ ကဆန္ဒပြပွဲများနောက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော နိုင်ငံရေး ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းဆန္ဒ များသည် အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာ၊ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု စီးပွားရေး အခြေအနေ အစိုးရ အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုချက်များ စသည့် အချက်များမှ စတင်ပေါက်ဖွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ဖို့နှင့် သမ္မတ ဆာလက်ဟ် နှုတ်ထွက်ဖို့ စသည်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၆။ ဆန္ဒပြသူ ၁၆၀၀၀ ကျော်သည် မြို့တော် ဆန်နာတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၇ နေ့တွင် စတင်စုရုံးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ၄င်းတို့ အထဲမှ ၁၀၀၀၀ကျော် လောက်သည် ဆန်နာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့မှာတော့ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် ၂၀၁၃ မတိုင်ခင် သူ၏သားအား အာဏာ မလွဲမပြောင်း မပြီး မချင်း ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးမည်မဟုတ်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့ တွင် ဆန္ဒပြသူ ၂၀၀၀၀ ကျော်သည် မြို့တော် ဆာနာနှင့် အဒမ်မြို့တွင် အစိုးရကို ထပ်မံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပြန်သည်။ ၄င်းဆန္ဒပြပွဲတွင် စစ်သားများ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယင်းတို့၏ လိုလားချက်များကို မြို့တော် ဆာနာတွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
၂၇။ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၁၈ ယင်းတို့အခေါ်(Friday Of anger)တွင် ယီမင်နိုင်ငံသား တစ်သိန်းကျော်ခန့် သည် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်းအား မြို့တော် ဆာနာနှင့် ဗိနည မို့များတွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်လေသည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့အခေါ်အရ (Friday Of return) တွင် သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ စစ်တပ်တွေ၏ အကြမ်းဖက်လူစုခွဲမှုကြောင့် လူသုံးဦး သေ ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဆန္ဒပြပွဲသည် အခြားမြို့များအထိ ကူးစက် ပျံနှံ့သွားပြီး အယ်လ်မူကာလာ မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ မြို့တော် ဆာနာတွင် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုများဖြင့် လူထုစုဝေးဆန္ဒပြမှု့ကို နှိမ်နှင်းခဲ့ရာတွင် လူ ၄၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။
၂၈။ ဧပြီလ ၂၃ မှာတော့ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် တောင်းဆိုချက်များနှင့် သမ္မတ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရေး၊ ဒုတိယသမ္မတအား တစ်လအတွင်း အာဏာလွဲပြောင်းပေး အပ်ရေးတို့ကို သဘောတူလက်ခဲခဲ့သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်များတွင် သူ့အား လွတ် ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရေးနှင့် သူ့မိသားဝင်များအား အကာအကွယ်ပေးရေး အတိုက်အခံ များအနေဖြင့် ယာယီအစိုးရဖွဲ့စည်းရာတွင် သူ၏ပါတီကိုပါ ပါဝင်ခွင့်ပြုရေး စသည့် အ ချက်များပါဝင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏တောင်းဆိုချက်များအား ပုံမှန်တရားဝင်သဘော တူညီမှုမဟုတ်ပဲ လက်ခံခဲ့ပြီး အတိုက်အခံဆန္ဒပြ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သမ္မတအကြား ပြေလည်မှုရအောင် ယာယီ သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် အာဏာစွန့်လွတ်မှုကို ပြန်လည်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက် အခြေအနေဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာ ခဲ့ပါသည်။ သြဇာအာဏာရှိသော လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် Sheikh Sadiq Al-ahmar ကို ထောက်ခံသော သမ္မတကိုဆန့်ကျင်သူတွေနှင့် သမ္မတကို ထောက် ခံသော သူတွေအကြားတွင် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ မြို့တော် ဆန်နာမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ မြို့တော် ဆန်နာ လမ်းမများပေါ်တွင် အမြောက်များပါဝင်သည်အထိ ပြသနာ များဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဇွန် ၃ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သမ္မတနန်းတော်ဝင်းအတွင်း ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် သမ္မတဆာလက်ဟ် အပြင် လူအတော်များများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ပြီး လူသုံးဦးသေကြေခဲ့သည်။မြို့တော်မှာရှိတဲ့ အစိုးရဆိုင်ရာအဆောက်အဦးအများစု ကို ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများသည် မြို့တွင်းတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အစပြုခဲ့သည်။
၂၉။ မေ ၂၆ တွင် မြို့တော် ဆာနာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၈၀ ကျော်မှာရှိသည့် အယ်လ်ဖက်ဟာနီဟန်း ဒေသရှိ ၄င်းတို့အား မြို့တော်မှာရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှုတွေ တွင် ပါဝင်ဆက်သွယ်မှုလာမည်ကို တားဆီးထားသည့် အစိုးရစခန်းကို ထရီမန်လူမျိုးစု တွေက ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ မြို့တော်သို့ ချီတက်မှုကို အစပြုခဲ့ခြင်း သည် အစိုးရတပ်များ ရွာတွေတွင်းသို့ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ဟု ထရီမန်တွေက အခိုင်အ မာဆိုခဲ့သည်။ ထရီမန်တွေသည် အစိုးရစခန်းတွင်းသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီး အခြေ စိုက်စခန်း၏ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အလီနက်စ်ဆာဂါတမီ အပါအ၀င် စစ်သား ၁၀ ဦး အားသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၄င်းစခန်းအား စီးနင်းသိမ်းပိုက်လိုက်ကြသည်။ ၄င်းနောက် အစိုးရ စစ်လေယာဉ်များနှင့် ယင်းစခန်းအား ဗုံးကြဲချခဲ့ကြသည်။ အစိုးရသည် ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် စစ်ကူများ သယ်ဆောင်လာပြီး စခန်းနှင့် ၂ ကီလိုမီတာအကွာသို့ ချခဲ့သည်။ စစ်သားများသည် စခန်းတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီး ထရီမန်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ တတိ ယမြောက်လေယာဉ်တစ်စီးသည် စခန်းပေါ်တွင် ၀ဲပျံပြီး ပစ်ခတ်ပေးခဲ့သည်။ စစ်တပ်အ ရာရှိတစ်ဦး၏ပြောဆိုချက်အရ ဂျက်လေယာဉ် ၇ စီးအထိ အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထရီမန်လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ထိုအချက်ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး စစ်တပ်တွေ သည် ထိုနေ့ တစ်နေကုန် ၄င်းတို့အားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပထမနေ့တွင် ထရီ မန် ၁၈ ဦးခန့် ယင်းတိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် နှစ်ဘက်စလုံး အ ထိအခိုက်အကျအဆုံးမရှိပဲ ယာယီအားဖြင့် စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့ကြသည်ဟု လူမျိုးစုခေါင်း ဆောင်အာလ်အယ်မာက ကြေငြာခဲ့သည်။
၃၀။ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနှင့် လမ်းမပေါ်က တိုက်ပွဲတွေသည် မြို့တော်ဆာနာ၏ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဲဒီ နောက်မှာတော့ ထရီမန်တွေသည် ပြည်သူ့လွတ်တော်အဆောက်အဦးနှင့် အမျိုးသား ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်း၏ အဓိကအဆောက်အဦးများအား ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြ ပြန်သည်။ ဇွန် ၁ ရက်နေ့မှာတော့ သမ္မတဆာလက်ဟ်ရဲ့သား အမိန့်နှင့် သမ္မတကိုယ်ရံ တော်တပ်ရင်းသည် နိုင်ငံ၏ စစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာနေရာ နိုင်ငံ၏ အဓိကလက်နက်စက် ရုံအပါအ၀င်နေရာများအား အစိုးရတပ်များနှင့် ထရီမန်များ၏ သဘောထားကွဲလွဲတိုက် ခိုက်မှုရန်မှ ကာကွယ်ထားခဲ့ကြသည်။
၃၁။ ဆာနာမြို့တိုက်ခိုက်မှုတွင် သမ္မတဆာလက်ဟ် အပါအ၀င် ၀န်ကြီးချုပ်၊ ဒုဝန်ကြီး ချုပ်၊ပါလီမန်ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ တို့သည် သမ္မတအိမ်တော်ဝင်းအတွင်းတွင် ၀တ်ပြု ဆုတောင်းနေစဉ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် လည်ပင်း၊ဦး ခေါင်းခွံနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏ သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံတော် (၇) ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် သမ္မတဆာလက် ဟ်သည် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ မြို့တော်တွင်ရှိသည့် ဆေးရုံကြီးတွင် သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ အရာရှိများက သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ အဆုတ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခန့် မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆော်ဒီအရာရှိများအနေဖြင့် သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ခွဲစိတ်မှု ၂ ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ခု ကတော့ ဗုံးအစများကို ဖယ်ရှားသည့် ခွဲ့စိတ်မှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏လည် ပင်းတွင် ထိခိုက်သွားသည့် နာဗ်ကြောလေးများအား ခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ သည်။
၃၂။ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ဆော်ဒီဆေးရုံပေါ်မှာတွင် ဆော် ဒီဘုရင် အဗ္ဗဒူလာနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အတိုက်အခံပါတီများအနေဖြင့် နိုင်ငံတ ကာမီဒီယာများ အမေရိကန် ဆော်ဒီများမှတဆင့် သမ္မတဆာလက်ဟ်အား ၄င်း၏အာ ဏာအား ဒုတိယသမ္မတအား လွဲပြောင်းပေးအပ်ရေးအတွက် ဖိအားပေးပြောဆိုမှုများ ပြု လုပ်ခဲ့သည်။ ဆာလက်ဟ်ဆေးရုံတက်နေသည့် အချိန်အတောအတွင်းမှာ သမ္မတဆာ လက်ဟ်သား စစ်တပ်နှင့် ထရီမန်တွေကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် ရောင်စုံလှုပ်ရှားမှုတွေ သည် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်သူများသည် သမ္မတ၏ သတင်းတွေကြောင့် မြို့တော်ဆာနာတွင် အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဒါဟာ သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကျဆုံးခန်းဟု လမ်းမပေါ်တွင် ဟစ်ကြွေးခဲ့ ကြသည်။ အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကတော့ ဒုတိယသမ္မတက နိုင်ငံတော် အာဏာ ကိုလွဲပြောင်း လက်ခံလိုက်ပြီဟု ကြေငြာသတင်းလွင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနေ့ မနက်ပိုင်း အထိ မြို့တော်၏ လမ်းအချို့တွင်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှာတွင် သမ္မတသစ်သည် စစ်တပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆာလက်ဟ်၏သားအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ဆာနာသည် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ဟု ထိုဒေသရှိ ဒေသခံများက ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆာလက်ဟ် ဆော်ဒီတွင် ဆေးကုသနေသည့် အချိန်အတောအတွင်း ယီမင်နိုင်ငံသည် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီဟု ဆိုကြပါသည်။ သို့သော် ဆာလက်ဟ် ဆော်ဒီတွင် ဆေးကုသပြီးနောက် ယီမင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်လာသောအခါ ဘာများဆက်ဖြစ်မည်ဆိုသည်ကိုတော့ ဆက်လက်လေ့လာ ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
ယီမင်တွင် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေး ဆောင်ရွက်ရန် အမေရိကန် ရဲ့ဖိအားပေးမှု
၃၃။ ပြည်ပတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသော ယီမင်သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ရာထူး မှနုတ်ထွက်ပြီး အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရေး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် ပည်တွင်းစစ် ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေ ရှောင်လွှဲနိုင်ရေးအတွက် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှုပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်အစိုးရက ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
၃၄။ ဆာလက်ဟ်အစိုးရနေရာတွင် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတစ်ခုနှင့် အစားထိုးနိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်သံတမန်များသည် ဆော်ဒီ ဥရောပနိုင်ငံများမှ သံတမန်များနှင့် ဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်နေစဉ် အိုဘားမားအစိုးရ၏ တိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ် သည်။ သမ္မတနေရာ လွဲပြောင်းယူထားသော ဒုတိယသမ္မတ အဘက်ရက် ဘိုမန်ဆူဝါဟာဒီက ယီမင်သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်လာနေပြီး လာမည့်ရက်များအတွင်း နိုင်ငံသို့ပြန်လာမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်း ဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဆာလက်ဟ်သည် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရချိန်တွင် ယီမင်အနေဖြင့် အာဏာလွဲပြောင်းပေးရေးအတွက် အဓိ ကရုဏ်းဖြစ်နိုင်မည့် အရေးကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အခွင့်အရေးရှိနေကြောင်း လေ့လာသူ များက သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် စနစ်တကျ အာဏာလွဲပြောင်းပေးရန် တိုက် တွန်းခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်စေပဲ ယီမင်အခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသော အာဏာလွဲပေးမှုကို ချက်ချင်းပြုလုပ်လျင် ယီမင်ပြည်သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်သည်ဟု ဟီလာရီကလင်တန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယီမင်သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ရာရခဲ့ ကြောင်း အဆုတ်ပျက်စီးသွားကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ပြော ကြားခဲ့သည်။ ယီမင်၏အကြီးအဆုံး အတိုက်အခံ ညွန့်ပေါင်း JMT ကမှု နိုင်ငံသို့ ဆာလက်ဟ် ပြန်မလာနိုင်ရန် ဟန့်တားသွားမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ တေ့ဇ်မြို့တွင် ဇွန် လ ၅ ရက် ညသန်းခေါင်ချိန်တွင် အစိုးရဆန့်ကျင်သူများနှင့် အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် တို့ အကြား ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယီမင်သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ ကျန်းများရေး တည်ငြိမ်လာနေကြောင်း ဆော်ဒီနိုင်ငံ တာာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှဇွန်လ ၇ ရက် နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဆန္ဒပြသူများက ကြားဖြတ်အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၃၅။ ဆာလက်ဟ်၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေပြီး ဦးရေခွံမီးလောင်မှုကို ခွဲစိတ်ကုသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆာလက်ဟ်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တစစယိုယွင်း လာကြောင်း သတင်းများမှာ အခြေအမျက် မရှိကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော ဆော်ဒီ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယီမင်သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် ၄င်း၏ခြံဝင်းအတွင်း တွင် ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခံခဲ့ရကြောာင်းကို ဆော်ဒီနိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံမှ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင်ထုတ် လွင့်ခဲ့သည်။ ဆာလက်ဟ်သည် ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ယီမင်၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ တေ့ဇ်ကို လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ဇွန်လ ရ ရက်နေ့တွင် သိမ်းယူခဲ့သည်။ လူမျိုးစုလက်နက် ကိုင် ၄၀၀ ကျော်က အဓိကမြို့ တေ့ဇ်ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစပြီး ယီမင်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သော ဆာလက်ဟ်ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရေးတောင်းဆိုမှုများ လေးလကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူ ၂၀၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများက ကြားဝင်ညှိနှိုင်းခဲ့သော ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပါက တရားစွဲဆိုမှုကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည့် သဘောတူညီချက်ကို ဆာလက်ဟ်က လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သည်။
၃၆။ လူရည်လည်လှသော သမ္မတ ဆာလက်ဟ် သည် အမေရိကန်ကဲ့သို့သော ဒီမိုကရေစီ ဦးဆောင်ဆိုသည့် နိုင်ငံကြီးနှင့်လည်း သင့်မြတ်အောင် ပေါင်းထားနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော် နိုင်ငံရေးအာဏာကို တစ်ဦးတည်း ဆုပ်ကိုင်ထားသော သမ္မတ ဆာလက်ဟ်ကို အမေရိကန်တို့က အာဏာရှင်ဟူ၍ တစ်ခါဖူးမျှ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် နှစ်စဉ် စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးအကူအညီများကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးအပ်ကူညီခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် အမေရိကန်တို့ အစိုးရိမ်ကြီးစိုးရိမ်လှသော ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် အုပ်စုများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ကူညီချေမှုန်း ပေးနေသည့်အပြင် အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့များ၊ စီအိုင်အေ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း နိုင်ငံတွင်း၌ လက်ခံထားကာ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့် ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက် ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၃၇။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက မြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော လူထုဆူပူအုံကြွမှုများက နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်စိုး လာခဲ့သည့် အစိုးရများကို ဇီဝိန်ချုပ် သွားစေခဲ့သောအခါ ယီမင်မှ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများကလည်း အလားတူလှုပ်ရှားအုံကြွလာခဲ့သည်။ သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ယင်းလှုပ်ရှားမှုများကို အင်အားသုံး၍ ဖြိုခွဲရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း ဆူပူဆန္ဒပြမှုများက နိဂုံးချုပ်မသွားပဲ သက်ဆိုးရှည်နေခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲများ၏ အင်အားသုံးမှုကြောင့် သွေးထွက် သံယို သေကျေ ဒဏ်ရာရမှု များစွာရှိခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ယီမင်အစိုးရကို အပြစ်တင်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ မဆန်မှုများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူ ပြဋ္ဌာန်းမှုများမပြုဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ မတည်မငြိမ်ဆူပူမှုနှင့် အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှု ရှိကြသည်ခြင်း အတူတူ လစ်ဗျားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားကိုမူ နှုတ်ဖြင့်သာအပြစ်တင်ကာ ယီမင်နိုင်ငံကိုမူကား အပြစ်ပင်မပြောဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ထိန်းချုပ်ကြရန်သာ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်မှာကား ထူးသော်လည်း မဆန်းသည့် မာခီယာဗဲလီပုံစံ အကျိုးစီးပွား အခြေပြုနိုင်ငံရေးပင် ဖြစ်တော့သည်။
၃၈။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပဋိပက္ခ သက်တမ်းရှည်လာသည်နှင့် အမျှ ပယောဂ ပေါင်းစုံ ၀င်လာတော့သည်။ တစ်ချိန်က သမ္မတဆာလက်ဟ်နှင့် ပုလင်းတူဘူးဆို့ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေး အင်အားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သော ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စု ခေါင်းဆောင် ညီအစ်ကိုများက ပြီးခဲ့သည့် မတ်လမှစ၍ အတိုက်အခံများဘက်သို့ ထောက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငွေကြေး ဖြင့်လည်း ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။ မေလ နှောင်းပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ သမ္မတဆာလက်ဟ် သြဇာအကျတွင် လစ်ဟာသော အာဏာ ကွက်လပ်၌ ၀င်ရောက်နေရာယူ၍ ဗြောင်ကျကျလှုပ်ရှားလာခဲ့ရာ ကျားအို ကျားနာကြီး ဖြစ်သော သမ္မတဆာလက်ဟ်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့လာတော့သည်။
၃၉။ ထိုအချိန်၌ သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ ဘက်တွင်လည်း အထိနာမှုများနှင့် ကြုံနေရသည်။ ယီမင် တပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့များ၊ တပ်မှူးများက အတိုက်အခံတို့နှင့် သွားရောက် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုးဆုံး ရိုက်ချက်မှာ အမှတ်(၁)သံချပ်ကာ တပ်မဟာတစ်ခုလုံး တစ်ဖက်သို့ ခွဲထွက်ပူးပေါင်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၄၀။ မထူးဇာတ်ခင်းကာ ကျားနာခဲ ခဲရတော့သည်။ ဆာလက်ဟ်သည် ပြိုင်ဘက် ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စု ခေါင်းဆောင် ညီနောင်နှစ်ဦး၏ စံအိမ်ကြီးများကို မေ ၂၃ ရက်တွင် အမြောက် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့ကြသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်မှာ နဂါးအမြီးကို သွားရောက် ဆွဲယမ်းလှုပ်ခါလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီး ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စု လက်နက်ကိုင်များက ဆားနားမြို့တော်ရှိ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန ရုံးအဆောက်အအုံ များကိုပင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ မြို့တွင်းတိုက်ပွဲများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွား လာတော့သည်။
၄၁။ ဇွန် ၃ ရက်တွင်မူ ဆန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်များက သမ္မတ အိမ်တော် ၀င်းကိုပါ ၀န်းရံ တိုက်ခိုက်ကြ့ရာ သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သမ္မတ၏ လုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ပင် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သည်အထိ အဖြစ်ဆိုးခဲ့သည်။ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်မှာ ရင်ဘက်တွင်အစထိမှန် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ မီးလောင် ဒဏ်ရာ အချို့လည်းရရှိခဲ့ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျမြို့တော် ရီယာဒ်သို့ ထွက်ခွာ၍ ဆေးကုသခံ ခဲ့ရသည်။
၄၂။ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ယီမင်မှထွက်ခွာကြောင်း သတင်းရသောအခါ အတိုက် အခံတို့က ၀မ်းသာအားရ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယီမင်၌ တိုက်ပွဲများ ဆက်၍ ဖြစ်နေဆဲ၊ အတိုက်အခံတို့က သမ္မတဆာလက်ဟ်အား ယီမင်သို့ ပြန်အလာ မခံတော့ဟု ကြုံးဝါးကြသည်။
၄၃။ ဆော်ဒီအစိုးရနှင့် အမေရိကန် စီအိုင်အေတို့က သမ္မတဆာလက်ဟ်ကို ယီမင်သို့ မပြန်တော့ရန် လုံခြုံမှုနှင့် ငွေကြေးကတိက၀တ် မက်လုံးများပေး၍ တိတ်တဆိတ် စည်းရုံး နေသည်ဟုလည်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည်။
၄၄။ သို့သော်ဆာလက်ဟ်မရှိလျှင် ယီမင်၌ မည်သူတက်လာမည်နည်း။ တက်လာ သူမှာ ဆာလက်ဟ်ကဲ့သို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သြဇာခံဖြစ်နိုင်ပါမည်လော စသည့် မေးခွန်းများမှာ ဆော်ဒီနှင့် အမေရိကန်တို့အတွက် ခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေသည်။ ထိုအတောအတွင်း AQAP ၏ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်များက ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းကာ အေဒင် ကမ်းခြေဒေသ၌ ဇန်ဇီဘာမြို့ကို သိမ်းလိုက်ပြီး အစ္စလာမ္မစ် ဘာသာရေးနိုင်ငံ ထူထောင်ရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်လာသည်။ ဤတွင် သမ္မတမရှိ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု ကင်းမဲ့နေသော ယီမင်၌ အမေရိကန်တို့က စိတ်တိုင်းကျ ၀င်ရောက်ကာ တိုက်လေယာဉ်များ၊ မောင်းသူမဲ့ပဲ့ထိန်းဒုံးတင်လေယာဉ်များဖြင့် ဇန်ဇီဘာကို မှုန့်မှုန့် ညက်ညက် ခြေလေတော့ရာ အပြစ်မဲ့စစ်ဒဏ်သင့် ပြည်သူများသောင်းနှင့်ချီ၍ ထွက်ပြေး ကြရတော့သည်။
၄၅။ ယခုအခါ လပေါင်းများစွာ ဆူပူအုံကြွမှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပြည်သူ အများမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စီးပွားရေးကိုပင် ဖြောင့်ဖြောင့် မလုပ်နိုင် သည့်အတွက် လည်းကောင်း စစ်စရိတ်ထောင်း၍ အစိုးရ၏ရှိစုမဲ့စု ဘဏ္ဍာငွေ ပြုန်းတီး ကုန်သောကြောင့်လည်းကောင်း နိုင်ငံ၏ အဓိက ၀င်ငွေစီးကြောင်းဖြစ်သော ရေနံ လုပ်ငန်းများလည်း လုံခြုံမှုကင်းမဲ့သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်လာ သောကြောင့်် လည်းကောင်း နိုင်ငံ့စီးပွားရေးမှာ ချွတ်ခြုံကျလာခဲ့သည်။ ရေမရ၊ မီးမရှိ၊ အလုပ်မရှိ၊ အသက်ဘေးလုံခြုံမှုမရှိသည့် ယီမင်လူထု၏ ဘ၀နှင့် စိတ်ခံစားမှုမှာ ပေါက်ကွဲတော့မည့် အခြေအနေသို့ တာဆူနေသည်။
၄၆။ သို့ရာတွင် ယခုအချိန်ထိ ရေရာသည့် ဖြည့်စွတ်မှုနည်းလမ်းကို ရေးရေးမျှ မမြင်ရသေး။ သမ္မတဆာလက်ဟ် ယီမင်သို့ ပြန်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြန်သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးနှင့် မျိုးနွယ်စု ပဋိပက္ခများကား ဆက်လက်ပြင်းထန်နေဖွယ်ရာ ရှိသည်။ ဤအထဲတွင် ပြည်ပမှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် တပ်မတော်ပြိုကွဲမှုက ယီမင်ကို စစ်ဘေးစစ်ဒဏ် ချောက်ကမ်းပါးအတွင်းသို့ ဆွဲချနေလေတော့သည်။
၄၇။ မြောက်ပိုင်းသား ဖြစ်သော သမ္မတ ဆာလက်ဟ် သည် ယီမင်နိုင်ငံ၌ အာဏာဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်း ၎င်း၏ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် လုံခြုံရေးအရ ရေးပါသော နေရာများတွင် အတွင်းလူ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို တာဝန်ပေးထားပါသည်။ အဖေတူအမေကွဲ ညီအစ်ကိုတော်သူကို လေတပ်ဦးစီးချုပ် ခန်.ထားပြီး သားဖြစ်သူကို သမ္မတစောင့်တပ် တပ်မှူး ခန်.ထားသည်။ တူတော်သူကို ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး ရာထူးများ၌ ခန်.ထားဆောင်ရွက်စေသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အကွက်အကွင်းကောင်းသော လုပ်ငန်းများတွင်လည်း နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများကို ချထားပေးခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။
၄၈။ တစ်ဖက်တွင်လည်း သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် ၎င်း၏ သြဇာအာဏာကို မလှန်နိုင်စေရန် လူမျိုးစုချင်း ပဋိပက္ခများ ရှည်ကြာနေအောင် သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ထားခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ လူမျိုးစု အကြီးအကဲများကို ရာထူးနေရာ အသီးသီး ပေးထားပြီး မသင့် မမြတ်ဖြစ်နေစေရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး အင်အား ချိန်ညှိထားသည်။ လူမျိုးစု အကြီးအကဲတိုင်း၌ ကိုယ်ပိုင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ရှိနေကြရာ အနောက်တိုင်းမှ လေ့လာသူတစ်ဦးက ယီမင်နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟု ဆိုသော်လည်း လက်တွေ့၌ လူမျိုးစု ပဒေသရာဇ် စစ်အာဏာရှင်များကို ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်ကိုလည်း တွေ.ရှိရပါသည်။
၄၉။ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် အမေရိကန်ကဲ့သို.သော ဒီမိုကရေစီဦးဆောင်ဆိုသည့် နိုင်ငံကြီးနှင့်လည်း သင့်မြတ်အောင် ပေါင်းထားနိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် နိုင်ငံရေးအာဏာကို တစ်ဦးတည်းဆုပ်ကိုင်ထားသော သမ္မတဆာလက်ဟ်ကို အမေရိကန်တို.က အာဏာရှင်ဟူ၍ တစ်ခါမျှစွပ်စွဲ ပြစ်တင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် နှစ်စဉ်စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး အကူအညီများကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်း များစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးအပ်ကူညီခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သမ္မတဆာလက်ဟ်သည် အမေရိကန်တို. အစိုးရိမ်ကြီး စိုးရိမ်လှသော ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ကူညီချေမှုန်းပေးနေ သည့်အပြင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ.များ၊ CIA အဖွဲ.ဝင်များကိုလည်း နိုင်ငံတွင်း၌ လက်ခံထားကာ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့် ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ်များ အသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထား သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅၀။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ အရှေ.အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကမြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော လူထုဆူပူအုံကြွမှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်လာခဲ့သော အစိုးရများကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သည့်အခါ ယီမင်နိုင်ငံမှ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ကလည်း အလားတူ လှုပ်ရှား အုံကြွလာခဲ့ကြပါသည်။ သမ္မတဆာလက်ဟ်၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.များမှ အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုကြောင့် သွေးထွက်သံယိုမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ သို့သော်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ယီမင်အစိုးရကို အပြစ်တင်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီမဆန်မှုများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူ ပြဌာန်းမှုများ မပြုဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ မတည်ငြိမ်ဆူပူမှုနှင့် အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှုများ ရှိကြသည်ခြင်း အတူတူ လစ်ဗျားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားကိုမူ နှုတ်ဖြင့်သာ အပြစ်တင်ကာ ယီမင်နိုင်ငံကိုမူကား အပြစ်ပင် မပြောဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ထိန်းချုပ်ကြရန်သာ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်မှာ အမေရိကန်တို.၏ အကျိုးစီးပွား အခြေပြု နိုင်ငံရေးကြောင့် ဖြစ်မည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
၅၁။ တချိန်က သမ္မတ ဆာလက်ဟ်နှင့် ပုလင်းတူ ဘူးဆို့ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေး အင်အားစုကြီးဖြစ်သော ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စု ခေါင်းဆောင်ညီအစ်ကို များက မတ်လမှစ၍ အတိုက်အခံများဘက်သို့ ထောက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မေလနှောင်းပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ သမ္မတ ဆာလက်သြဇာအကျတွင် လစ်ဟာသော အာဏာကွက်လပ်၌ ဝင်ရောက်နေရာယူ၍ ဗြောင်ကျကျ လှုပ်ရှားလာခဲ့ရာ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ.ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် သမ္မတ ဆာလက်ဟ်၏ ဘက်တွင်လည်း အထိနာမှုများနှင့် ကြုံနေရပါသည်။ ယီမင်တပ်မတော် တပ်ဖွဲ.များ၊ တပ်မှူးများက အတိုက်အခံတို.နှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုးဆုံးမှာ အမှတ်(၁) သံချပ်ကာတပ်မဟာတစ်ခုလုံး တစ်ဖက်သို့ ခွဲထွက်ပူးပေါင်းသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၅၂။ ဆာလက်ဟ်သည် မထူးဇာတ်ခင်းကာ ပြိုင်ဘက် ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင် ညီနောင်နှစ်ဦး၏ စံအိမ်ကြီးများကို မေ ၂၃ ရက်တွင် အမြောက်လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ ထိုအခါ ဟာရှစ်မျိုးနွယ်စု လက်နက်ကိုင်များက မြို.တော်ဆာနာရှိ အစိုးရဝန်ကြီးဌာန ရုံးအဆောက်အဦးများကိုပင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ မြို.တွင်းတိုက်ပွဲများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားလာသည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။
၅၃။ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ.တွင် ဆန်.ကျင်ဘက် လက်နက်ကိုင်များက သမ္မတအိမ်တော်ဝန်းကို ဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သမ္မတ၏ လုံခြုံရေး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ သမ္မတ ဆာလက်ဟ်သည် ရင်ဘတ်တွင် အစထိမှန် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာ အချို.လည်း ရရှိခဲ့ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျမြို.တော် ရီယာဒ်သို. ထွက်ခွာ၍ ဆေးကုသခံခဲ့ရပါသည်။ ဆာလက်ဟ် ယီမင်မှထွက်ခွာသည်ကို ကြားသိရသောအခါ အတိုက်အခံတို့ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယီမင်၌ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅၄။ ဆန္ဒပြမှုများသည် နိုင်ငံတိုင်းတွင် အခြေအနေ အမျိုးမျိုး ကြောင့်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ နိုင်ငံရေးကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စည်းပွားရေး ကြပ်တည်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်သည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ ဆာလက်သည် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် ယီမင်ကို အုပ်ချုပ်လာခဲ့သော်လည်း တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ ယီမင်ပြည်သူများ သည် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု နှင့် ဖိနှိပ်ခံရမှုများကြောင့် အပြောင်းအလဲကို လိုလားလာကြသည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။ လူ.သဘော သဘာဝအရဖြစ်တတ်သည့် သဘောဖြစ်သောကြောင့် လူ.သဘော သဘာဝကို သိရှိရန်လိုအပ် ပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူ သမ္မတမှ မျှမျှတတနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီပွားကို ကြည့်ကာ အုပ်ချုပ်မည်ဆိုပါက ယီမင်တွင် ယခုကဲ့သို. ဆန္ဒပြ ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည် မဟုတ်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ ထိုသို.သော အခြေအနေမျိုးတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြေပေါ် မြေအောက် ဆူပူသောင်းကျန်းသူများ ဝင်ရောက်လာတတ်သည်ကို AQAP ၏ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်များက အေဒင်ကမ်းခြေဒေသ ဇန်ဇီဘာမြို.ကို သိမ်းပိုက်ပြီး အစ္စလာမ္မစ်ဘာသာရေး နိုင်ငံထူထောင်ရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ဝင်ရောက်လာသည် ကိုကြည့်ခြင်း ဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ အတိုက်အခံများမှ လည်း မီဒီယာကို အသုံးချ၍ ဝင်ရောက် လာတတ်သည်ကိုလည်း သတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
၅၅။ ထို့ကြောင့် ဆူပူမှုများဖြစ်နိုင်သည်နှင့် သတင်းအမှန်ကို မီဒီယာမှ တဆင့်ချပြခြင်း၊ ပြည်သူကို နားမယောင်စေရန် စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယီမင်တပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မှူးများမှာ အတိုက်အခံတို့နှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းသည်ကို တွေ.့ရှိရသောကြောင့် မိမိတို.အနေဖြင့် ထိုသို.သောကိစ္စများတွင် တပ်မတော်သားများ နားယောင်ပြီး ပါဝင်မှု မရှိစေရေးအတွက် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိစေရန် တပ်တွင်း သက်သာချောင်ချိရေး၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ထက်သန်စေမည့် ဟောပြောဆွေးနွေးမှုများ၊ မိမိနိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်ကို ပိုမိုချစ်မြတ်နိုးစေရန် ဆောင်ရွက်ချက်များ စသည်တို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်။
၅၆။ ယခုအခါ ယီမင်နိုင်ငံတွင် လပေါင်းများစွာ ဆူပူအုံကြွမှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပြည်သူအများမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စီးပွားရေးကိုပင် ဖြောင့်ဖြောင့် မလုပ်နိုင်သည့် အတွက် လည်းကောင်း စစ်စရိတ်ထောင်း၍ အစိုးရ၏ ရှိစုမဲ.စု ဘဏ္ဍာငွေ ပြုန်းတီး ကုန်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ၏ အဓိက ဝင်ငွေ စီးကြောင်းဖြစ်သော ရေနံလုပ်ငန်းများလည်း လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု ထိခိုက်လာသောကြောင့် လည်းကောင်း နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာ ချွတ်ခြုံကျလာခဲ့သည်။
၅၇။ ဆော်ဒီအစိုးရနှင့် အမေရိကန် CIA တို.က သမ္မတ ဆာလက်ဟ် ကို ယီမင်သို. မပြန်တော့ရန် လုံခြုံမှုနှင့် ငွေကြေး ကတိကဝတ်မက်လုံးပေး၍ တိတ်တဆိတ် စည်းရုံးနေသည်ဟု လည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ သို.သော် ဆာလက်ဟ် မရှိလျှင် ယီမင်၌ မည်သူတက်လာ မည်နည်း။ တက်လာသူမှာ ဆာလက်ဟ် ကဲ့သို. ယုံကြည်စိတ်ချရသော သြဇာခံ ဖြစ်နိုင်မည် မဖြစ်နိုင်မည် စသည်တို.ဖြင့် ဆော်ဒီနှင့် အမေရိကန်တို.အတွက် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်နေပါသည်။
၅၈။ သို့ရာတွင် ယခုအချိန်အထိ ရေရာသည့် ဖြည့်စွက်မှု နည်းလမ်းကို မမြင်ရသေးပေ။ သမ္မတဆာလက်ဟ် ယီမင်သို. ပြန်လာသည် ဖြစ်စေ၊ မပြန်လာ သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးနှင့် မျိုးနွယ်စု ပဋိပက္ခများကား ဆက်လက်ပြင်းထန်နေဦးမည် သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို.သော ပဋိပက္ခများကြားတွင် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် တပ်မတော် ပြိုကွဲမှုက ယီမင်ကို စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်သင့် စေရန်အတွက်တွန်းပို့ နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါတော့သည်။
၄။ http://en.wikipedia.org/wiki/ Battle_of_Sana'a
၅။ နိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ်၊ အမှတ် ၈၁၁၊ ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၁၃-၁၉။
သူတို့လိုချင်တဲ့ စာတမ်းရဲ့ ပှိုင့်ကဘာဆိုတာ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီး သေချာမြင်တွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
Scribd ဖိုင်၌ စာလုံးများ ကောင်းစွာ မမြင်ရပါက Scribdမှာ PDFကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ကြည့်ပါရန်။